နောက်ဆုံးပေါ် iphone အသစ်နဲ့ အပျိုစင်ဘဝကိုလဲခဲ့တဲ့ ၉ တန်းကျောင်းသူလေးရဲ့အဖြစ်
ဒီနေ့အတွက်သင်ခန်းစာအရဆုံး ပိုစ့်(သို့) မိဘတိုင်းဖတ်သင့်တဲ့စာ ကပ်ဆိုး ဒီစာကိုရေးသင့်မရေးသင့် စဉ်းစားနေတာကြာပြီ။ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံး ရေးသင့်တယ်ထင်လို့ ရင်ကွဲနာ ဗလပွနဲ့ ရေးလိုက်ရပါတယ်။ ဒေါ်မြနေတဲ့ လမ်းထဲမှာ ဒေါ်မြနဲ့ သိပ်ရင်းနှီးတဲ့ ကလေးမလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်.. ။ သူ ၅ တန်းကျောင်းသူဘဝကတုန်းက ဒေါ်မြ အင်္ဂလိပ်စာ ပြပေးဖူးတယ်။ စေတနာ ဂိုက် […]
ဆေးရုံ ရှမှေ့ာ ရောငျးတဲ့ အသုပျဆိုငျကိုဆေးရုံအုပျကွီးက သနျ့ရှငျးမှု ရှိမရှိ သှားရောကျ စဈဆေးလိုကျသောအခါ
ဆေးရုံ ရှမှေ့ာ ရောငျးတဲ့ အသုပျဆိုငျကိုဆေးရုံအုပျကွီးက သနျ့ရှငျးမှု ရှိမရှိ သှားရောကျ စဈဆေးလိုကျသောအခါ ဆေးရုံ ရှေ့မှာ ရောင်းတဲ့ အသုပ်ဆိုင်ကိုဆေးရုံအုပ်ကြီးက သန့်ရှင်းမှု ရှိမရှိ သွားရောက် စစ်ဆေးလိုက်သောအခါ အသုပ် သုပ်တဲ့ အမျိုးသမီးက အသုပ်ကို နယ်တဲ့အခါ လက်အိတ် မစွပ်ပဲ နယ်တာ တွေ့တော့ […]
လအလိုက်ခရီးသွားသင့်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကဒေသများ တချိန်ချိန်မှာ အသုံးဝင်မှာဖြစ်လို့ ရှဲထားလိုက်ပါ
ဇန်နဝါရီလ..၊ ဇန်နဝါရီလမှာ ခရီးသွားသင့်တဲ့နေရာကတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲက မြောက်ဦးမြို့ပါပဲ။ မြောက်ဦးမြို့ဟာ ရှေးဟောင်း သုတေသနလုပ်ငန်းအတွက်လည်း အရေးပါတဲ့ နေရာတနေရာဖြစ်သလို ရှုမငြီးနိုင်တဲ့ စေတီပုထိုးတွေကိုလည်း ဖူးမြော်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်..။ ဖေဖော်ဝါရီလ..၊ တရုတ်နှစ်သစ်ကူးအချိန်ဖြစ်တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလမှာဆိုရင်တော့ လူကြိုက်များတဲ့နေရာမျိုးတွေကို မလည်ပတ်သင့်ဘဲ အစားအသောက်အလွန်ကောင်းတဲ့ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းက သီပေါနဲ့ ကျောက်မဲမြို့တွေကို ခရီးထွက်သင့်ပါတယ်..။ ကျေးရွာတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့ ရှမ်းလူမျိုးတွေရဲ့ […]
အရှိန်ဖြင့် မောင်းနှင်လာသော ကားတစ်စီးက ကိုရင်လေး တစ်ပါးကိုတိုက်ပြီး မောင်းပြေးသဖြင့် ပျံလွန်တော်မူသွား(ကနဦးသတင်း) တာချီလိပ်တွင် ကားတစ်စီးက အရှိန်ဖြင့် ကိုရင်လေးတစ်ပါး ကိုတိုက်မိရာ ဆေးရုံမပို့ဘဲ မောင်းပြေးသဖြင့် ပျံလွန်တော်မူသွားသည့် ကနဦးသတင်းဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့ ည(၇:၀၀) နာရီအချိန်ခန့်တွင် တာချီလိတ်မြို့ ဟောင်လိတ်ရပ်ကွက် […]
ကျောင်းတက်နေတဲ့ သားလေးကို ပိုက်ဆံတွေ ခိုးလာတယ်ထင်ပြီး မေးကြည့်လိုက်ရာမှ သိလိုက်ရတဲ့ အဖြစ်မှန်
ကျောင်းတက်နေတဲ့ သားလေးကို ပိုက်ဆံတွေ ခိုးလာတယ်ထင်ပြီး မေးကြည့်လိုက်ရာမှ သိလိုက်ရတဲ့ အဖြစ်မှန် မိဘတွေဟာ ကလေးတွေအပေါ်မှာ အရမ်းစိုးရိမ်ကြီးတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလို စိုးရိမ်ကြီးတတ်တာကြောင့် ကလေးငယ်တွေကို တစ်ခါတစ်ရံမှာ အထင်လွဲတတ်ပါတယ်။ ယခု တင်ဆက်ပေးမယ့် သတင်းလေးကတော့ မိမိ ကလေးငယ်ကို ကျောင်းကနေ ပိုက်ဆံ ခိုးလာတယ်လို့ ထင်ခဲ့မိတဲ့ အဖြစ်ပါပဲ။ […]
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မဲထည့်ကြဖို့ တိုက်တွန်းတဲ့ ဦးလေးကြီးရဲ့ ဂီတ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မဲထည့်ကြဖို့ တိုက်တွန်းတဲ့ ဦးလေးကြီးရဲ့ ဂီတ မကြာခင်မှာ ဆိုရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီခေတ်ဖြစ်သည်နှင့်အညီ မိမိတို့နှစ်သက်တဲ့ပါတီနဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်များကို လွတ်လပ်စွာမဲပေးနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့အဖိုးတန်တဲ့မဲတစ်ပြားကို တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက် စေတနာထားမယ့်၊ ပညာတတ်တဲ့ လူတော်လူကောင်းများကို ရွေး ချယ်မဲထည့်ကြဖို့လိုပါတယ်။ ဒါမှသာ ခေါင်းဆောင်ကောင်းများ တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ပီး နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဗွီယိုထဲက […]
ဩစတြေးလျ တောမီးဘေးသင့်နေသောနေရာရှိ တိရစ္ဆာန်များအတွက် မုန်လာဥနီနှင့်ကန်စွန်းဥများကို လေယာဉ်ပေါ်မှကြဲချ
ဩစတြေးလျ တောမီးဘေးသင့်နေသောနေရာရှိ တိရစ္ဆာန်များအတွက် မုန်လာဥနီနှင့်ကန်စွန်းဥများကို လေယာဉ်ပေါ်မှကြဲချ ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၊ နယူးဆောက်ဝေးလ်ပြည်နယ်အစိုးရက တောမီးနှင့်ရင်ဆိုင်နေရပြီး အစာရေစာပြတ်တောက်နေသည့် သားပိုက်ကောင်များအတွက် မုန်လာဥနီနှင့်ကန်စွန်းဥ ကီလိုထောင်နှင့်ချီ၍ လေကြောင်းမှ ကြဲချပေးလျက်ရှိသည်။ နယူးဆောက်ဝေးလ်အမျိုးသားဥယျာဉ်နှင့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးဝန်ထမ်းများက ပြီးခဲ့သည့်ရက်သတ္တပတ်အတွင်း ကိပ်ထရီးနှင့်ဝိုဂန်တောင်ကြား၊ ယန်ဂိုအမျိုးသားဥယျာဉ်၊ ကင်ဂရူးတောင်ကြား၊ ဂျီနိုလန်ဒေသတစ်ဝိုက်၊ အော့စလေမြစ်နှင့် ကာရာကူဘန်ဒီအမျိူးသားဥယျာဉ်တို့ရှိ သားပိုက်ကောင်များနေထိုင်ကျက်စားရာနေရာများသို့ အစားအစာများကြဲချခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ […]
ဈေးထဲသီးချင်းဆိုတဲ့စုံတွဲဗွီယိုဖိုင် လူကြည့်များနေ။ အဆိုတော်တေသနားတယ်
ဈေးထဲသီးချင်းဆိုတဲ့စုံတွဲဗွီယိုဖိုင် လူကြည့်များနေ။ အဆိုတော်တေသနားတယ် ဒီဗွီယိုဖိုင်လေးကလည်း အွန်လိုင်းမှာ လူကြည့်များတဲ့ဗွီယိုဖိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သနားစရာကောင်းပါတယ် မျက်မမြင်ပါတဲ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် ဘ၀မှာ စိတ်ဓာတ်မကျပဲ ကိုယ်တတ်စွမ်းတဲ့ ဂီတလေးနဲ့ ပရိတ်သတ်ကို ဖျော်ဖြေပီးရိုးသားစွာလုပ်ကိုင်စားသောက်နေတာပါ။ ဂုဏ်ယူစရာပါ။ ကျွန်တော်တို့ ဘ၀တွေမှာ ဘယ်သောအခါမှ ပြည့်စုံ တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။ ဒါကို လက်မှိုင်ချငြီးတွားနေမယ်ဆို ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်လိုအခြေအနေ […]
ညဘကျအိပျမပြျောသူတှအေတှကျ နှဈနှဈခွိုကျခွိုကျအိပျပြျောစမေယျ့လကေ့ငျြ့ခနျးမြား ညဘက်တွေမှာ ကောင်းကောင်းအိပ်မပျော်ဘူးဆိုရင် နောက်နေ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ အာရုံစူးစိုက်လို့မရဖြစ်မယ်၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေမယ်၊ ကိုယ်ရည်ရွယ်ထားသလောက် အလုပ်ပြီးအောင်မလုပ်နိုင်တာမျိုးတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး၊ အိပ်ရေးပျက်တာနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဖြစ်လာတဲ့အခါ ကျန်းမာရေးကိုပါ ဆိုးဆိုးရွားရွားထိခိုက်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ညဘက်အိပ်မပျော်တဲ့သူတွေ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်အောင် ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေလုပ်ပေးလိုက်ပါ။ လွယ်လွယ်လေးတွေပါနော်။ လေ့ကျင့်ခန်း(၁) ကြမ်းပြင် ဒါမှမဟုတ် အိပ်ရာပေါ်မှာ လဲအိပ်လိုက်ပြီး ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကိုနံရံမှာကပ်ထောင်ထားလိုက်ပါ။ […]
အခက်အခဲတွေနဲ့ အရမ်း ကြုံနေရရင် ဒီဂါထာလေး ရွတ်ကြည့်ပါ
အခက်အခဲတွေနဲ့ အရမ်း ကြုံနေရရင် ဒီဂါထာလေး ရွတ်ကြည့်ပါ တစ်နေ့ ၇ ခေါက် ပုံမှန်ရွတ်ရုံနဲ့ ထူးခြားပါလိမ်မယ်။ သိကြားမင်း ဂါထာတော် ဝေဒါသာကု ၊ ကုသာဒါဝေ …. ဒါယသာတ ၊ တသာယဒါ သာသာဓိကု ၊ ကုဓိသာသာ …. ကုတကုဘု ၊ […]